Health – Page4– Alinyaung
ရင်သားကင်ဆာအပါဝင် အခြားရောဂါများစွာကို သက်သာပြောက်ကင်းစေတဲ့ ကျောက်သင်ပုန်းရွက်(သို့)နတ်သမီး ကွမ်းရွက်
April 5, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ဒါကတော့(Peperomia pellucida)ကျောက်သင်ပုန်းရွက်(သို့)နတ်သမီး ကွမ်းရွက်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ ကျောက်သင်ပုန်းမှ စာတွေကို ပြန်ဖျက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အလေ့ကျပေါက်သည့် အပင်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပင်မှာ ကင်ဆာရောဂါကို တွန်းလှန်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Antioxidants ပါဝင်တယ်။ ဗီတာမင်စီဓါတ်များတယ်ပြီး ဗီတာမင်အေဓါတ်ကို ဖြည့်စွမ်းပေးတဲ့ Beta-carotene ပါဝင်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းဆေးဆရာများကတော့ ဒူလာဆေး၊ […]
ကြံရည်ကြိုက်သူများ …. လုံးဝကျော်မသွားနဲ့ဗျာ
ကြံရည်မှာ လူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ စွာသာမက ဘက်တီးရီးယားပိုး မြောက်များစွာပါဝင်တာကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံ MOH မှ investigation လုပ်ရာမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ စားသောက်ဆိုင် တွေဟာ ကမ္ဘာက စံထားရလောက်အောင် သန့်ရှင်းပါတယ် ။ ဆိုင်တွေကိုလည်း ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စီစစ်လေ့ရှိပြီး […]
ကနီမြို့နယ်တွင် လူ ၁၀၀ ကျော် အစာအဆိပ်သင့်
￼ Unicode ကနီမွို့နယျတှငျ လူ ၁၀၀ ကြျော အစာအဆိပျသငျ့ Monday, April 2, 2018 စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ ကနီမွို့နယျ၊ မုဌောရှကြေ့ေးရှာမှာ လူ ၇၀ ကြျော အစာအဆိပျသငျ့ပွီး မူးဝအေော့အနျဖွဈလို့ ကနီပွညျသူ့ဆေးရုံနဲ့ မုဌော အလယျတနျးကြောငျးမှာ ယာယီဆေးခနျးဖှငျ့လှဈ ဆေးကုသမှုပေးနရေပါတယျ။ အစာအဆိပျသငျ့တဲ့ […]
မိန်းကလေးများ လျစ်လျူရှုထားမိတဲ့ ဟော်မှုန်းမမျှတမှုလက္ခဏာများ…
ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေက ဟော်မုန်းမမျှတ မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု ၊ စိတ်ငြစ်ငြူးမှုတွေကို သိကြပေမယ့်ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ကဟော်မုန်းမမျှတမှု ကိုပြသလဲ ဆိုတာတော့ မစဉ်းစားဘဲ လျစ်လျူရှုထားကြပါတယ်။ ဟော်မုန်းက တက်လိုက်ကျ လိုက်ဖြစ်နေချိန်မှာ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုမကောင်းခြင်း ၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ၊ ဝက်ခြံထွက်လာခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဟော်မုန်းမညီမျှမှုဖြစ်စေတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေက […]
ကန်စွန်းရွက်ကို လူတိုင်းကြိုက်လို့စားနေကြတယ်..။ ဒါတွေကိုတော့ လူတိုင်း မသိကြပါလား..
ကန်စွန်းရွက်၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ….. (ကောင်းလွန်လို့နေတိုင်းတောင် စားသင့်ပါသည်လို့ အကြံပြု့ ပါသည် ) သင့်ချစ်ဇနီးက ကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ ကန်စွန်းရွက်သုပ်၊ ကန် စွန်းရွက်ချည်ရည်ဟင်း စသဖြင့် ကန်စွန်းရွက်ကို ပင်တိုင်စံ ဟင်းတစ်ခွက်လို မပါမဖြစ် ချက်ပြုတ်ကျွေးတဲ့အခါ “ဒီနေ့ လည်း ကန်စွန်းရွက်ပဲလား ကွာ” […]
“နှင်းခူအတွက် ဆေးတစ်လက်” နှင်းခူအတွက် နက္ခတ္တရောင်ခြည်ကို ကျေးဇူးတင်ရတော့၏။ အကြောင်းကား တောထဲတောင်ထဲနှင်းခူစွဲ နေသောတပည့်များအတွက် နှင်းခူးပျောက်သောဆေးနည်းတစ်လက်ရ၍ဖြစ်တော့၏ နှင်းခူရောဂါကို Eczema(သို့) dermatitis ဟုခေါ်၏။ အရေပြားပေါ်တွင် အကွက်လိုက်အကွက်လိုက် ရောင်ရမ်းပြီး အရေပြားကို အလွန်ယားယံစေသောရောဂါဖြစ်လေသည်။ ဖြစ်ရသောအကြောင်းအရင်းမှာ မိမိဝန်းကျင်တွင် မိမိခန္ခာကိုယ်ဖြင့် မတည့်သော ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဓာတ်တုန့်ပြန်မှု(allergic Rection)ကြောင့်ဟု […]
အရက်​အရမ်း​သောက်​ခဲ့တဲ့အစ်ကို တ​ယောက်​ အခု​တော့ အသဲမှာ အနာဖြစ်​လို့ ​ဆေးရုံခနခဏ တက်​​နေရပြီ။​ဆေးရုံတက်​ ​ဆေးစစ်​လိုက်​​တော့ အသဲကင်​ဆာတဲ့။ အသဲကင်​ဆာဖြစ်​​နေတဲ့ အစ်ကို အတွက်​ သူမိသားစုတခုလုံးက စိတ်​မချမ်းမသာ ဖြစ်​​နေရပြီ။ တမိသားစုလုံးလည်း မနားရ။​ဆေးရုံတက်​​တော့ အ​စောင့်​က နှစ်​​ယောက်​​စောင့်​ရတယ်​။​ သွေးသားဖြစ်​​နေ​တော့လည်း ​ရောဂါ​ပျောက်​ရေး ​ဘယ်​​ဆေး​ကောင်းမလည်း စုံစမ်း​နေရတာကလည်း တလုပ်​။ ​​ […]
အားလုံး အတွက်​ အ​ရေးကြီးလို့ မိတ်​​ဆွေ ဆရာဝန်​တစ်​​ယောက်​ ​ပြောပြထားတဲ့ ​ဟောဒီအချက်​​လေးကို သတိထားကြဖို့ မျှေ​ပေးလိုက်​​အောင်​​နော်​
အားလုံး အတွက်​ အ​ရေးကြီးလို့ မိတ်​​ဆွေ ဆရာဝန်​တစ်​​ယောက်​ ​ပြောပြထားတဲ့ ​ဟောဒီအချက်​​လေးကို သတိထားကြဖို့ မျှဝေပါရ​စေ။ ည ည အိပ်​​ပျော်​ ​နေရာက ဆီးသွားချင်စိတ်ကြောင့်​ နိုးလို့ ဘဲဖြစ်​ဖြစ်​ နံနက်​​စော​စော အိပ်​ရာ အထမှာ ဖြစ်​ဖြစ်​ လူတိုင်း မိနစ်​ဝက်​ သုံးကြီမ်​ သတိထား ခြင်းဖြင့်​ […]
အချိုမှုန့်ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာနဲ့ လုပ်ထားတာလဲ? ဘယ်လောက်များ အန္တရာယ်ပေးနိုင်လဲ?
အချိုမှုန့်ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာနဲ့ လုပ်ထားတာလဲ? ဘယ်လောက်များ အန္တရာယ်ပေးနိုင်လဲ? ချစ်မိတ်ဆွေ……. သင့်အိမ်ထဲမှာ သင်နှင့်အတူ သင့်မိသားစုကိုပါ အသံတိတ် သတ်ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့ လူသတ်သမားကို သင်ကိုယ်တိုင် အိမ်ထဲသို့ဖိတ်ခေါ်ထားမိသလားဆိုတာ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် စီစစ်သင့်ပါပြီ။ ရေရှည် မှန်မှန် စားသွားရင် ဒီလောက်အန္တရာယ် များပါတယ်ဆိုတဲ့ အချိုမှုန့်ဆိုတာ Monosodium glutamate(MSG) […]
တစ်ရက်ငှက်ပျောသီး ၂လုံး ၁လစားပြီးနောက် အံ့သြ သွားမည့် အပြောင်းအလဲ
တစ်ရက်ငှက်ပျောသီး ၂လုံး ၁လစားပြီးနောက် အံ့သြ သွားမည့် အပြောင်းအလဲ ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ– တစ်လောကလုံးက လူသားများအားလုံးက သစ်သီးစားသုံးခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တယ် ဆိုတာ လက်ခံထားကြပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အ၀လွန်ရောဂါ၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက် ရောဂါအဖြစ်များတဲ့ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အများဆုံးစားသုံးတဲ့အသီးဟာ ဘာအသီး ဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ။ ပန်းသီး၊ လိမ္မော်သီး နှင့် ဖရဲသီးများလား။ […]